﻿ ‘विकासको काममा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन’ : राजकुमार कार्की
आइतबार ०५, असोज २०७६
सुन्दरहरैचा नगरपालिका वार्ड नं. ९ विराटचोक क्षेत्रमा पर्छ । सुन्दरहरैचाको सबैभन्दा ठुलो हाटबजार यो वडामा लाग्ने हुँदा ढल, बाटो तथा बजार व्यवस्थापन गर्न वडालाई समस्या छ । जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्षपछि वडाको प्रगती र अन्य विषयमा वडाध्यक्ष राजकुमार कार्कीसँग न्यूजलयकी सरिता भण्डारीले गरेको कुराकानीको सार प्रस्तुत गरिएको छः
आजभोली निरन्तर रुपले जनताका काम तथा वडाको विकासका काममा व्यस्त छौं ।
अहिले वडाको विकासको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले वडाको विकासको अवस्था राम्रो छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने हामीले भौतिक पूर्वाधारमा बढी विकास गरेका छौं । यस्तै भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै हामीले सामाजिक विकास पनि गरेका छौं । सामाजिक विकासका लागि विभिन्न तालिमहरु सम्पन्न गरेका छौं । यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि विकास गरेका छौं ।
यो वडाको मुख्य समस्या भनेको बाटो, खानेपानी, सरसफाइ तथा बजार व्यवस्थापन हो । बर्षाको समयमा परेको पानी कता बगाउने भन्ने समस्या हुने गर्छ । ढलको समस्या यो वडाको मुख्य समस्या हो । त्यस्तै यहाँ कृषि बजार छ । प्रदेश एकमा एक विगाहा दुई कठ्ठा जग्गा लिएर आफ्नो स्वामित्वमा बजार सञ्चालन गर्ने बजार कृषि बजार हो । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या भइरहेको छ । शिक्षाको विषयमा पनि यहाँ समस्या छ । सामुदायिक विद्यालयहरु ३–४ वटा छन् । यी विद्यालयहरुको गुणस्तरलाई कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तित छौं ।
यो वडाको विकास गरिरहँदा कुन विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुभएको छ त ?
पहिलो प्रथमिकता भनेको भौतिक पूर्वाधार नै छ । जनप्रतिनिधिहरु आइसकेपछि वडामा धेरै विकासका योजनाहरु माग भइरहेका छन् । जनताहरुको अपेक्षा पनि भौतिक पूर्वाधारका विकास नै भएकाले हामीले भौतिक पूर्वाधारलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटो अथवा अन्य आवश्यकता अनुसारका विषयलाई हेरेर हामी योजना तयार गरीरहेका छौं ।
वडाको समस्या र विकासको विषयमा कोसँग के आग्रह र माग राख्नु भएको छ ?
वडाको समस्या अन्त्यका लागि जाने भनेको नगरपालिका नै हो । नगरपालिकाबाट पनि समस्या समाधान गर्न सकिएन भने प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकारसँग पनि पहल गर्छौं ।
वडाको मात्र नभएर देशकै विकासका लागि सबै भन्दा पहिला भ्रस्टाचार नियन्त्रण हुन जरुरी छ । जति पनि वडामा बजेट आएको हुन्छ, त्यो बजेटलाई सदुपयोग गरिनु पर्छ । विकास निर्माणको काममा आफ्ना मान्छेलाई योजना दिएर कमिसन खाने सोच बनाइयो भने विकास कदापि हुन सक्दैन । विकास भयो भने पनि दीर्घकालिन हुदैन । आफ्नो कार्यकाल भरि निष्ठावान् भएर काम गर्नु पर्छ भनेर आफूलाई उभ्याउन सकियो भने वडा तथा देशको विकास चाँडो हुन्छ ।
अन्त्यमा आफ्ना वडावासीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ।
म यस वडावासीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकी हिजो चुनावमा लडिरहँदा मलाई साथ दिनुभयो । मैले चुनाव जितेर आएको दुई वर्ष हुँदा पनि मसँग कुनै अन्तरद्वन्द छैन । केही समस्या छ भने पनि म सँग आएर राख्नु भएको छ । मलाई यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिनु भएको छ । सबैलाई साथ र मलाई विश्वास दिनु भएकोमा आभारी छु । आगामी दिनहरुमा पनि यो वडाको विकासमा लागि पर्ने छु ।
विदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने नेपालीको संख्या ३१९ पुग्यो
औषधि उद्योगले लकडाउन अवधिको विद्युत शुल्क छुट पाउने
धनगढीमा साढे १० करोडको लागतमा चिस्यान केन्द्र निर्माण हुँदै
औषधि लिन जान्छु भन्दै घरबाट निस्किएका इटहरीका एक युवक बेपत्ता
पदभार ग्रहणको पहिलो दिन नै दर्जन निर्णय उल्ट्याउँदै बाइडन